वर्षेनी बाढीको त्रासमा इटहरी गैरीगाउँका बासिन्दा : RajdhaniDaily.com
सत्ता आतंक विरुद्ध खबरदारी गर्न रौतहटमा जनप्रदर्शन
एकै परिवारका ३ जनाको मृत्युपछि उदयपुरको खैजनपुर ‘सिल’
खाेप लगाउन हिँडेकाहरू चढेकाे डुङ्गा पल्टिँयाे, एकको मृत्यु, तीन बेपत्ता
यादव पक्ष सरकारमा, ठाकुर पक्ष जनतामा
हानथापले समस्याः आउलान् असल मन्त्रीहरू ?
कोरोना संक्रमणले तीन साताभित्र विदेशमा थप ३९ नेपालीको निधन
राजधानीका सडक भ्वाङै भ्वाङ
गठबन्धनको सरकार : जनअपेक्षा र आगामी भूमिका
मन्त्री कस्ता ?
निजामती सेवामा नागरिक बडापत्र
Homeप्रदेशप्रदेश २वर्षेनी बाढीको त्रासमा इटहरी गैरीगाउँका बासिन्दा
विवेक विवश रेग्मी,
इटहरी । झन्डै चार बर्षअघि विनासकारी बाढीबाट इटहरीमा एकै घरका तीन जनासहित दस जना बेपत्ता भए । जसमध्ये ८ जनाको शव भेटियो । दुईजना अझै बेपत्ता छन् ।
इटहरी वडा नं. ४ को गैरीगाउँका एकैघरका रामकुमार राई, आशा राई र निमेष राईलाई बाढीले बगायो । यीमध्ये आशाको शव भेटियो । रामकुमार र निमेषको शव अझै भेटिएको छैन । आशा र राजकुमार श्रीमान–श्रीमती हुन् भने निमेष छोरा । आशा र राजकुमारकोमा पाहुना गएकी सानुमाया राई छ घण्टा बगेर बच्न सफल भइन् । उनको त्यो घटना सम्झदा अहिले पनि स्थानीयको आङ् नै सिरिङ् हुन्छ ।
बाढीमा दस किलोमिटर बगेकी सानुमाया चार वर्ष अघिको घटना सम्झदै भन्छिन्, ‘दिउँसै बाढी आएको हल्लाले गर्दा राति निन्द्रा लागेको थिएन, उहाँहरु सुति सक्नुभएको थियो ।’ उनका अनुसार राति उज्यालोले सुतेको खटिया मुनीसम्म पानी आएको देखिन् अनि कराइन् । उनले जोडले कराएपछि दिदी–भिनाजुसँगै अरु भाईबहिनी उठे ।
इटहरी वडा नं. ४ को गैरीगाउँका एकैघरका रामकुमार राई, आशा राई र निमेष राईलाई बाढीले बगायो । यीमध्ये आशाको शव भेटियो । रामकुमार र निमेषको शव अझै भेटिएको छैन । आशा र राजकुमार श्रीमान–श्रीमती हुन् भने निमेष छोरा । आशा र राजकुमारकोमा पाहुना गएकी सानुमाया राई छ घण्टा बगेर बच्न सफल भइन्
बाहिर निस्कन लाग्दा दिदी आशादेवी राईं र भिनाजु राजकुमार राईंलाई खोलाले बगायो । दिदी भिनाजुका दुई जना छोराछोरीलाई पनि बगायो । तर, गाउँलेले केही बेरमै उद्दार गरे । त्यही बेला उनलाई पनि खोलाले बगायो । सानुले निरन्तर हात–खुट्टा चलाइन् । बीच बीचमा ठूला ठूला झाडी र रुखमा उनी ठोकिने गर्थिन् । घरीघरी उनलाई बाढीले भित्र पसाउन्थ्यो त घरीघरी बाहिर निकाल्थ्यो । उनले आँखा नहेरीकन निरन्तर संघर्ष गरिरहिन् ।
बर्षायाम सुरु भएपछि इटहरी गैरीगाउँका बासिन्दाले सानुमायालाई सम्झन्छन्, सानुमाया र उनले भोगेका कथा सुन्न लालायित बन्छन् । तर, वर्षेनी यो समस्या दोहोरिदाँ त्रासमा बस्न बाध्य रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
स्थानीय राजकुमार भुजेल भन्छन्, ‘वर्षेनी बाढीको समस्या दोहोरिदाँ त्रासमा बस्न बाध्य छौँ, सरकारले जहिल्यै पनि घटना भइसकेपछि मात्रै चासो देखाएजस्तो गर्छ ।’ स्थानीय बुढीखोलामा आएको बाढीले वर्षेनी गैरीगाउँलाई पिरोल्छ । स्थानीय सरकारले त्यसको दीर्घकालीन समाधान नगरेका कारण यो समस्या झेल्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘जहिल्यै पनि असार, साउनमा बाढी आउँछ, केही न केही क्षती गरेरै जान्छ,’ उनले केही आक्रोश पोखिएको अनुहारसहित राजधानीसँग भने, ‘यहाँका अधिक घरपरिवार मजदूरी नै गरेर जीविकोपार्जन गर्ने भएकाले अन्नबालीमा पनि बाढीले क्षती पुर्याउछ, पशुपंक्षीमा पनि बाढीले क्षति गर्ने गरेको छ, यसबारेमा हाम्रो गुनासो सुनिदिने कोही नै छैन ।’
०७४ सालको घटना पुनः नदोहरियोस् भनेर इटहरी उपमहानगरले २०७५ साल पौष २८ गतेबाट राष्ट्रपति चुरे संरक्षणबाट आएको करिब ६० लाख र अन्य स्रोत जुटाएर तारजाली लगाएर नदी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेपनि तटबन्धन भत्किएको छ । तटबन्धनका कारण केही हदसम्म भएपनि बाढी नियन्त्रण भएपनि तटबन्धन भत्किदाँ त्रासमा रात बिताउन बाध्य भएको स्थानीय बताउँछन् ।
स्थानीय तहले मुख्य आयस्रोतका रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ठेक्का दिएपछि तटबन्धन भत्किएको स्थानीय मञ्जु साफीले बताइन् । ‘नेताहरुले यहाँको मिसगिटी सबै ट्याक्टरमा हालेर लगेको कारण यहाँ बाढी पस्ने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘करीब १४ बर्ष अगाडि त खोला ठूलो थियो, अहिले त स्थानीय मानिसहरुले पनि खोला मिचेका कारण सानो भएकाले गाउँमा बाढी पस्ने गरेको छ, दिनदिनै ढुंगा, बालुवा खोलाबाट लग्ने गरेका छन् ।’ बाढीका कारण वर्षेनी इटहरी ४ गैरीगाउँका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।
०७५ मा टीकाप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षमा एक समितिबाट तटबन्धन निर्माण भएको थियो । कामको सुरुवातमै चित्तबुझ्दो काम नभएको भन्दै निर्माण गरिसकिएको जाली वाल पुनः निर्माण गरिएको थियो । निर्माण समितिले जग नै नखनी माथि माथि जाली लगाउँदा यस्तो समस्या आएको स्थानीयको बुझाई छ । यता, इटहरी ४ का वडाध्यक्ष चन्द्र भट्टराईले भने आँफूहरुले बर्षेनी रुपमा तटबन्धनको काम गरिराखेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘थोरै पैसा आउँछ, थोरै काम गर्नुपर्छ, सामान्य बाढी आउँदा त त्यस्तो खतरा हुँदैन ।’
विशेषगरी वर्षेनी इटहरीका ३, ४, ६, ९, १०, ११ नं. वडाका बासिन्दा बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित बन्दै आएका छन् । यसअघि चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १ कराड ५० लाख रुपैँया नदि नियन्त्रणका लागि छुट्याएको इटहरी उपमहानगरपालिकाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा बाढीपीडित जहिल्यै त्रासमा बस्न बाध्य छन् । नदि नियन्त्रण योजनामा ९ वटा खालाहरु थिए । ती मध्ये बुढीखोला मानव धर्म छेउमा २० लाख रुपैँया बजेट परेको थियो । तर, प्रभावकारी काम नहुँदा स्थानीयले वर्षेनी सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।
राजधानी समाचारदाता - August 1, 2021
दार्चुला घटना : भारतीय पक्षद्वारा एसएसबीको संलग्नता अस्वीकार
धनगढी । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ मालघाटमा शुक्रबार तुइनबाट खसेर नेपाली युवक जयसिंह धामी बेपत्ता भएको विषयमा एसएसबीको संलग्नता नरहेको भारतीय पक्षले दाबी गरेको छ...
ईश्वर तामाङ -
उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका– २ खैजनपुरमा कोभिड संक्रमणले एकै परिवारमा ३ जनाको मृत्यु भएपछि सिल गरिएको छ । गएको २२ दिनभित्र कोभिड संक्रमणबाट...
दार्चुला घटनामा भारत सरकारलाई ध्यानाकर्षण खोइ ?
काठमाडौं । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काट्दा शुक्रबार दार्चुलाका युवा जहसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भए । सो घटनाको विषयमा सरकारले अझै आफ्नो...
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गरेकी छन् । सैनिक ऐन, २०६३को दफा ८ को उपदफा (३) अनुसार...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी भए पनि सरकारमा भने...
भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका उखु किसान पुनः आन्दोलनको तयारीमा
काठमाडौं । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आफूहरुले उत्पादन गरेको उखुको करोडौँ भुक्तानी नपाएको...
काठमाडौं । कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालका आईसीयू र भेन्टिलेटर फेरि भरिन थालेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा अहिले...
क्वारेन्टाइनबाट घर लगिएका युवालाई फेरी क्वारेन्टाइनमै फर्काइयो
सप्तरी । क्वारेन्टाइनबाट आफन्तले जबरजस्ती घर लिएर गएका सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका ७ का एक युवालाई गाउँलेहरुले सम्झाई बुझाई शुक्रबार पुनः क्वारेन्टाइनमै फर्काएका छन् । भारतको...
तनहुँमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, चालकसहित ८ जना घाइते
तनहुँ । बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ब्यास-५ चापाघाट बस्ने बर्ष ५५ का राजकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्...
सत्ता गठबन्धनमा सहमति, विश्वासको मत यसै साता
कोरोना थप फैलिएसँगै नुवाकोटमा निषेधाज्ञा क्षेत्र बढाइयोः सेना परिचालन
पूर्णतामा संवैधानिक आयोगहरू
प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमित संख्या १०३ पुग्यो
अब पुरानै भवनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनेको संख्या २ लाख नाघ्यो
अमेरिका र बेलायतबाट एक करोड डोज भ्याक्सिन ल्याउने गृहकार्य
‘बेलायतबाट फर्केका क्वारेन्टिनमा बस्नू’
सविन शर्मा - July 28, 2021
सञ्जयको फिल्ममा क्यान्सर र कोरोनाको असर
एजेन्सी - July 30, 2021
नेपालमा डेल्टा प्रजातिको नयाँ म्युटेन्ट भेटियो, सचेत रहन आग्रह
नगेन्द्रराज पौडेल - July 26, 2021
खामोसी डेफ विजेता बन्न सफल बझाङकी हेवन
डीबी विष्ट - July 30, 2021